Akukho semthethweni ukushawa ngamaphoyisa | Scrolla Izindaba
Akukho semthethweni ukushawa ngamaphoyisa
Ngemuva kokuthi uCollins Khosa kusolwe ukuthi washaywa wacishe wabulawa ngamasotsha e-SANDF, inkantolo yayala ukuthi kumele kushicilelwe imihlahlandlela yokusebenzisa amandla ngesikhathi somvalelo.
NgoLwesithathu uKhomishana wamaphoyisa kazwelonke uKhehla Sitole ukhiphe imihlahlandlela enamakhasi ayi-12.
Bathe ukuhlukunyezwa, okubandakanya nokuzwisa umuntu ubuhlungu ukuze uthole imininingwane noma ukujezisa, kuyicala lobugebengu. “Noma sikwisimo senhlekelele … asikho isizathu sokuhlupha noma sokuhlukumeza umuntu.”
Futhi kunelinye iphuzu amaphoyisa amaningi adinga ukulizwa: “Amalungu amaphoyisa akumele asebenzise… imishini engakhishiwe yi-SAPS efana ne-‘sjambok.”